Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke ihe ọ bụla ịre ahịa na atụmatụ ọ bụla, mana na-enweghị ndị nyere gị akaebe iji kesaa ịntanetị ka atụmanya wee nwee ike nyocha ma jikọọ na ndị ahịa, atụmatụ ntụkwasị obi ndị ahịa gị ezughi oke. Iji otu ikpo okwu iji rụọ ọrụ na nchịkọta, nchịkọta, na nkwalite nke nyocha ndị ahịa dị mkpa maka azụmaahịa na-ere n'ịntanetị.
Mgbakọ na mwepụ ebe a dị ka dodgy. Ihe atụ dị na vidio ahụ na-enye 120 ziri ezi, 20 na-adịghị mma, na 10 kpebiri nyocha adịghị mma. Ọ bụrụ na m tinye nọmba ndị ahụ na usoro dị n'elu, m ga-enweta 572.75 karịa 62.41% dị ka egosiri na vidiyo ahụ.
Ikwuru eziokwu, achọrọ m imelite edemede a. Usoro a bụ n'ezie V = 7.9 (.62P -.17N² + .15R).
Jun 5, 2021 na 5:40 AM
OWO, post na-adọrọ mmasị. Echetụla na e nwere mgbako na-ebu amụma Ahịa na Nyocha Online. Daalụ maka ringkekọrịta. M gbakọọ na akara m bụ: 1620.53%. Kedu ihe bụ uche gị banyere akara ahịa m?
Chaị! Nke ahụ ga-abụ ịwụ elu ma kelee gị maka nyocha gị.